Ukuphupha ngeKlette ▷ ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
IBurdock luhlobo oluthile lwezityalo kusapho lwejongilanga olusasazeke e-Eurasia naseMantla e-Afrika ngokukodwa. Uphawu lweziqhamo kukuba ziyakwazi ukuhambelana nempahla okanye uboya bezilwanyana ukuze zisasazeke. Le propati yenza i-burdock ingathandwa kakhulu ngabo babambelela kubo. Inokubanjwa ngenwele ezinde, isenza kube nzima ukuyikhupha apho.
Nangona kunjalo, i-burdock kudala yadlala indima ebalulekileyo kunyango lwesintu. Iimpawu zayo zokuchama nokucoca zixabiseke kakhulu apho. IBurdock isetyenziselwa ikakhulu i-rheumatism kumalungu, kodwa nakwizilonda kunye neengxaki zesisu. Kukwacetyiswa ukufakwa kweengcambu ze-burdock ezicoliweyo, kunye nezinye izinto ezintsha okanye ezomileyo zesityalo se-burdock. Ioyile yengcambu yeBurdock iyaziwa, ethi ikhutshelwe njengombuyisi weenwele.
Ngokudibeneyo, i-burdock isetyenziswa xa umntu ethandwa kakhulu. Kwi el mundo yamaphupha kukho ne-burdock. Ingaba sisiqhamo okanye i-burdock yomntu.
1 Uphawu lwephupha «burdock» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «burdock» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «burdock» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «burdock» - ukutolikwa ngokubanzi
Njengakwilizwe elivukayo, ibubock nayo ayonwabanga kwaye iyacaphukisa kwihlabathi lamaphupha. Ukuba iphupha libona ibutockock, emva koko linokubhengezwa ngalo mfanekiso wephupha ukuba kungekudala liza kuba lininzi. abantu abangenayo Kuya kufuneka uyenzile.
Rhoqo i-burdock ephuphileyo ifanekisela a umthwalo onzima ebomini bokuvuka. Ukuphupha kunengxaki enkulu yokubasusa kwakhona.
Ukuba i-burdock iyawakhathaza amaphupha kwilizwe lamaphupha, ke bayakulumkisa ukuba ayivumelekanga ukuba isetyenziswe ngabanye abantu abayibona njengeyona ndlela yokufikelela esiphelweni.
Ngamanye amaxesha ngumntu ophuphayo ophosa umthwalo kwi-burdock komnye umntu ngelixa belele. Kule meko, umfanekiso wephupha ubonisa ukuba ekuphupheni uthanda into ethile. Nuevo o Kunqabile Ndifuna ukulinga.
Uphawu lwephupha «burdock» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokwenkcazo yengqondo yephupha, i-burdock ingabonisa ukuba iphupha libambelela kwinto ethile. Idla ngokuba yinto ekudala iphelelwe lixesha. Nangona kunjalo, iphupha alinakuyekwa lihambe.
Enye indlela iguqulela i-burdock njengesimboli saloo nto Ndiziva ndikunye. Ngokwesiqhelo kukho umthwalo omninzi onokubonwa kwihlabathi lamaphupha xa le ntsingiselo ibonakala.
Kuxhomekeke kwisenzo sephupha, i-burdock inokuba sisalathiso somntu kwihlabathi elivukayo, elenga njenge-burdock ephupheni.
Uphawu lwephupha «burdock» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya, ibutockock iba ubuhlobo obusondeleyo ifuzisela.